ट्राफिक जामले हैरान भए युवा, बनाए आफ्नै हेलिकप्टर ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
ट्राफिक जामले हैरान भए युवा, बनाए आफ्नै हेलिकप्टर !
access_time२०७६ साल मंसिर १६ गते, सोमबार ०६:०२ PM chat_bubble_outline Comments folder_open संसार विज्ञान प्रविधि रोचक​
जुनैदीले हेलिकप्टरको लम्बाइ २६ फिट रहेको र यसमा पेट्रोल लाग्छ । ७०० सिसि र २३ हर्जपावरको जेनेरेटर लगाएका जुनैदीको हेलिकप्टर अहिलेसम् मभने परीक्षण गरिएको छैन ।
जुनैदीको हिम्मतलाई उनका छोराले पनि साथ दिएका छन् । २०१९को अन्तिम वा २०२०को सुरुवातमा यसको निर्माण सम्पन्न हुने र परीक्षण गरिने उनले बताएका छन् । हेलिकप्टरका लागि उनले दैनिक हुने कमाइको निश्चित प्रतिशत रकम लगाएका छन् ।